ARRIMAHA BULSHADA Archives | SOMALI NEWS U Adeegaha Bulshada
Home / ARRIMAHA BULSHADA
admin 21/04/2019	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa been abuur ku tilmaamey in Xukuumadda Soomaaliya ay awood u adeegsato mucaardka aan hubeysneyn ee kasoo horjeeda dowladda soomaaliya. Ra’iisul Wasaaraha oo wareysi siiyey tv-ga Universal ayuu sheegay in amarka dowladnimo uu yahay in markii la doonayo in dhaqaalaha horumarin lagu sameeyo la fogaado musuq maasuqa,taasina ay hormuud u tahay la-xisaabtanka dowladda. ...
Qaraxyadaas oo gaaraya ilaa Lix ayaa ahaa kuwo aad u waa weyn,waxaana ay Maanta ka dhaceen kaniisado iyo iyo hoteello ku yaalla Magalada Colombo oo ah Caasimada dalka Sri Lanka. Xilluiga ay qaraxyada dhacayeen ayaa waxaa lagu jiray ciida Masiixiga,waxaana sigaar ah ay uag dhaceen kaniisdo iyo Hoteelo ku yaalla degmooyinka Kochchikade, Katuwapitiya iyo Batticaloa, sida ay shaacinayeen warbaahinta Caalamka ...
admin 15/04/2019	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
War-Saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Hir-Shabeelle ayaa waxaa lagu qaadacay Shir looga hadlayey howlaha gargaarka iyo dar dar galintooda kaas oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Gargaarka iyo Maareeynta iyo Musiibooyinka Xukuumadda Soomaaliya laguna qabtay Magalada Muqdisho. Shirkaasi waxaa ka qeyb galay dhamaan Wasaaradaha/hey’adaha Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka ee heer Dowlad Gobaleed,hayeeshee Maamulka Hir-Shabeelle uu qaaday qodobadii kasoo baxay shirkaas. War-Saxaafadeedka ...
Aaba Aweys Maxamed Diinle oo ah Aabaha Wiil Dhalinyaro ahaa kana mid ahaa Darawalada mooto Bajaajka,kaas oo Askari ka tirsan Ciidanka dowladda uu ku dilay Magalada muqdisho ayaa walaac ka muujiyey in uu Cadaalad u helo dilkii loo geystay Wiilkiisa. Waxa uu sheegay in Wiillkiisa uu nolol maalmeedka u soo dhicin jiray Qoys farabadan,isla markaana markii la dilay ilaa iyo ...
admin 07/04/2019	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Wasiir ku xigeenka Beeraha iyo Waraabka Maamul goboleedka Hirshabelle Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim”Daqare” ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyey Maamulka Hir-Shabeelle lagu xaqiijiyey in Hay’adaha qaarkood ay musuq maasuq ku sameeyeen deeqaha loogu talo galay dadka Beeraleyda ah. Waxa uu sheegay in looga digayo Madaxda Hay’daha samafalka inay musuq maasuqaan deeqaha loogu talo galay Beeraleyda deegaanada Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle oo ...
admin 01/04/2019	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Dadkaan ku sumoobay Boorashka ay cabeen ayaa tiro ahaan waxa ay gaarayaan ilaa 35 ruux oo isugu jira Carruur iyo Haween, kadib markii dadkaasi ay boorashka ka cabeen Xarumo laga qeybinayay oo ku yaalla Degmooyinka Kaxda iyo Waaberi ee Magalada Muqdisho. Dadkaan ayaa waxaa la geeyey Isbitaalka Banaadir ee Magalada Muqdisho,waxaana ay isugu jiraan kuwo Koomo galay iyo kuwa xaaladooda ...
admin 30/03/2019	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Madaxweyne Dani Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo weftigii balaarnaa ee uu hogaaminayey ayaa maanta soo gaarey magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Madaxweynaha Puntland iyo weftigiisa oo saaka kasoo kicitimay degmada Carmo ayaa waxaa magaalada Boosaaso kusoo dhoweeyey maamulka gobolka Bari, kan degmada Boosaaso, qaar kamid ah Goleyaasha dowladda Puntland iyo boqolaal kamid ah shacabka magaalada Boosaaso. Madxaweynaha ayaa meel ...
Madaxweyne Saciid Deni oo dadweyne aad u farabadan oo isugu soo baxay barxadda weyn ee Carmo oo kula hadlay ayaa waxa uu sheegay inay Puntland ay ahmiyad gaar ah siin doonto sugida amniga iyo daryeelka Ciidamada,isla markaana xusay inay ogyihiin duruurafaha adag ee ay ku shaqaynayaan. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida meelkastay joogaan, siday marwalba ugu ...
Saadaasha Khabiirka BBC Sports Ee Lawrenson Ee ku aadan Kulamada 32aad,
Liverpool ayaa mar kale halgan u geli doonta inay sii xajisato hoggaanka Premier League marka ay Axadda iska hor yimaaddaan Tottenham oo ay ku ballansan yihiin kulanka dhimashada ee Axadda. Liverpool oo laba dhibcood ka sarraysa Manchester City oo kusoo xigta laakiin ay ciyaar baaqi u tahay, ayaa waxay garoonkeeda Anfield ku qaabili doontaa Spurs oo kaalinta saddexaad inay sii ...
Shir ay yeelan lahayeen Madaxda Maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe oo fashilmay,
Madaxweynaha Puntland Siciid C/llaahi Deni ayaa 28-dii Bishii koowaad ee Sanadkaan Magaalada Garowe kaga dhawaaqay in Bisha March Garowe lagu qaban doono Shir u dhaxeeya Madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda, kaasoo lagu dhameystiri rabay kulankii Garowe ee Afgaradka horudhac ah looga gaaray Khilaafkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda. Ilo lagu kalsoonaan karo oo ku dhow Madaxda maamul goboleedyadda ayaa ...
Dhageeyso)Madaxweynha D/F,Somaaliya oo ka hadlay Qaab dhismeedka Caasimada,
admin 28/03/2019	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhamestirtay hindise sharciyeedka doorashooyinka iyo dib u eegista Sharciga Xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi-socodka dimuqraadiyeynta dalka. Waxaa sidoo kale Madaxweyne Farmaajo sheegay in Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka ka wada xaajoon doonaan qaab dhismeedka Maqaamka Caasimadda iyo dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka dalka. Arrinta la xiriirta ...
Xildhibaan Baarlamanka Soomaaliya ka tirsan oo dad ku dilay deegaanka soomaalida Itoobiya,
Xildhibaan dad ku dilay Deegaanka Soomalida ITOOBIYA-Labada marxuum iyo xildhibaanka ayaa la sheegay in ay isku haysteen dhul beereed. Dacwad isqabqabsigan la xiriirta ayaa taalla maxkamadda degmadda Jarati, sida uu gudmoomiyuhu sheegay. Xildhibaan Bashiir Diiriye Camey iyo labo qof oo la socotay oo midkood uu darawal ka ahaa bajaajtii waday ayaa xabsi la dhigay waxaana socda baaritaan. “Xukuumaddii hore ayaa ...
admin 27/03/2019	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Xidiga Kooxda Kubadda Cagta ee juventus Cristiano Ronaldo ayaa dhawaan dhaawac dhinaca muruqa uu soo gaaray intii lagu guda jiray kulankii ay ku wada ciyaareen xulalka Portulgal iyo Serbia, kaas oo ka tirsanaa isreeb reebka koobka Euro 2020-ka. Cristiano Ronaldo maray dhowr baaritaano caafimaad, taasoo lagu ogaaday inuu dhaawac ka soo gaaray muruqa, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay kooxda ...